HAMA nehanzvadzi dzekuSri Lanka dzakagamuchira vaenzi 130 vakabva kunyika 19 vachiuya kuzoona kutsaurirwa kwebazi pachitsuwa ichi chinoyevedza. Dzainge dzakapfeka zvipfeko zvemunyika macho. Paiva neboka revana vakaimba nziyo dzeUmambo, uye vanhu vese vakanakidzwa nezvinhu zvinoratidza tsika nemagariro emo, chikafu chemo chinonaka, mimhanzi inonakidza, pamwe chete nekuwadzana kwechiKristu.
Zvivako zvebazi zvitsva nezvakanga zvagadziridzwa zvakatsaurirwa kuna Jehovha musi weMugovera 11 January 2014, vanhu 893 vachinyatsoteerera purogiramu yacho mumitauro mitatu. Vanhu vakaombera maoko kwechinguva Hama Sanderson veDare Rinodzora pavakabvunza kuti, “Mungada here kutsaurira zvivako zvitsva izvi kuna Jehovha Mwari?”
Mangwana acho, vanhu 7 701 vakanakidzwa nekudzokororwa kwepurogiramu yeMugovera uye vakakurudzirwa nehurukuro yaHama Sanderson. Vanhu vaiva mune dzimwe nzvimbo shanu dzakakura vaiteererawo purogiramu yacho. Kekutanga, nzvimbo dzacho dzese dzakabatanidzwa nevhidhiyo zvekuti hama nehanzvadzi dzaiva munzvimbo dzacho dzaikwanisa kuonana uye kunzwanana dzichiimba nziyo dzeUmambo. Chiitiko ichi chakaita kuti vanhu “vafare kwazvo” uye chicharamba chichiyeukwa.—Neh. 12:43.
Mahofisi Uye Kuratidzwa Zvinoitwapo: Sri Lanka
Vaenzi vakasununguka kuratidzwa zvinoitwa pahofisi vasingabhadhariswi.